Boolisku waxay joojiyeen argagixisadii Mombasa, Kenya, miyaanay ahayn?
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Xuquuqda Aadanaha » Boolisku waxay joojiyeen argagixisadii Mombasa, Kenya, miyaanay ahayn?
Guddiga Dalxiiska Afrika • Wararka Dowladda • Xuquuqda Aadanaha • Wararka Kenya • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Si wanaagsan ayay u sameeyeen Ciidamada Gaarka ah ee Kenya waxay ahayd ammaanta guud ee tallaabo geesinimo leh oo bilaysku ka qaaday doontii Likoni ee Mombasa, Kenya Isniintii.
Ammaanku wuxuu ahaa mid aan lahayn aragtiyo shirqool oo su’aalo lagu weydiinayo bilayska iyo sababta weriyuhu ugu diyaar -garoobay goobta oo kaamirada ku qabanaya dhacdada. Bilayska Kenya wuxuu u baahnaa in la riixo bulshada deegaanka. Sheekadan guushu waxay taaban kartaa dhibka iyo taageerada bilayska ee taageerada boolisku la kulmaan adduunka oo dhan inta lagu jiro aafadan.
Booliska Kenya ee ku sugan magaalo xeebeedka Mombasa ayaa xiray dad looga shakisan yahay argagixiso goobtaan mashquulka ah Doonida Likoni isagoo gudbaya, kana soo helay laba qori oo AK-47 ah, taleefanno, iyo rasaas.
Ku dhajinta twitter -ka ayaa su’aalo ka keenaya sababta saxafiga sawir -qaadaha ah uu diyaar ugu yahay inuu qabsado baskaan.
Dhacdadu waxay fureysaa dood ku saabsan is-dhexgalka bulshada iyo naxariis-darrada booliiska ee ka dhalatay xaaladda COVID-19. Tani waa isbeddel caalami ah.
Doonida Likoni waa a adeegga doonta oo ka gudbaya Harbor -ka Kilindini, oo u adeegaya magaalada Mombasa ee Kenya inta u dhaxaysa dhinaca jasiiradda Mombasa iyo xaafadda weyn ee Likoni. Laba ilaa afar doonyood oo laba jibbaaran ayaa isku bedbeddela dekedda, oo qaada waddada iyo lugta labadaba.
Sida laga soo xigtay Tripadvisor, Lilkoni waa waayo-aragnimo khasab ah oo loogu talagalay dalxiisayaasha marka ay booqanayaan gobolka loo dalxiis tago ee Mombasa ee Kenya.
Booliiska magaalada Mombasa ee dalka Kenya ayaa subaxnimadii Isniinta ka qabtay laba qof oo looga shakisan yahay argagaxiso kanaalka isgoyska Likoni.
Daawo fiidiyowga YOUTUBE oo uu bixiyay xubin ka tirsan Guddiga Dalxiiska Afrika. Waxaan ku xaddidnay fiidiyaha dadka waaweyn sababtuna waa waxyaabaha aan ku habboonayn carruurta.
Ka sokow bilaysku waxay soo heleen laba qori oo AK-47 ah, laba majalladood, baangado, iyo hub kala duwan. waxaa laga yaabaa in sheekadu intaa ka badan tahay iyo sababta ay u soo shaac baxday oo ay u xaliyeen saraakiisha geesinimada leh ee bilayska Kenya sidii ay ahayd.
Dhacdadan oo socotay shan daqiiqo oo dadka maxalliga ah ku baraarugsanayn, askartu waxay rasaas ku rideen cirka, waxayna indhaha ka xireen tuhmanayaasha, waxayna geliyeen gawaarida booliska.
Mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa su’aalo ku weydiiyay Twitter -ka: “Muuqaalka goobta Doonida Likoni ayaa dareenkaygii soo jiitay. Sidee bay ku timid dhar si qarsoodi ah u shaqeeya, [ay] awoodeen inay ku lug yeeshaan saxaafadda si ay u arkaan iyaga oo ficil ah? Ma waxay u maleeyeen inay naftooda iyo ta shacabkaba halis gelinayaan? Wax kalluun baa socda. ”
Qof kale ayaa raaciyay: “How imow kooxaha kaamirooyinka saxaafada ayaa hore u joogay goobta xitaa b4 dhacdada? Wali, ma aysan noo heli karin wax xabad ah si aan u aragno wajiyada argagixisada? ”
Ilo wareedyo maxalli ah ayaa sheegay in boolisku ay ku dhaqmayaan xog ay heleen ka dib markii ay Mombasa ku xireen tuhmane argagixiso oo dhowaan la qabtay, kaasoo markaas daboolka ka qaaday faahfaahinta weerarka la qorsheeyay.
Dhexgalka ayaa yimid kadib markii dowladda Mareykanka ay soo saartay la -talin xagga socdaalka ah oo loogu talagalay booqdayaasha Mareykanka ee qorsheynaya inay booqdaan Kenya sababo la xiriira khataraha argagixisada.
Labaduba waxay hubka ka soo rareen Lunga Lunga waxayna u sii tallaabayeen Mombasa, halkaas oo looga shakisan yahay inay qorsheeyeen inay weeraraan goob amniga lagu sugo, oo ay u badan tahay saldhig boolis.
Xiisadda ayaa cirka isku shareertay Likoni Ferry iyagoo ka gudbaya, gobolka Mombasa, ka dib markii bilayska la-dagaallanka argagixisada ay si dhaqso ah ugu hawlgaleen sirdoonka, iyagoo hawshaas ku guda jira ka-hortagga baabuur doonayay inuu ku fuulo doonnida sugaysa oo wadata rasaas sharci-darro ah.
Isuduwaha Gobolka Xeebta John Elungata oo xaqiijiyay dhacdadan ayaa sheegay in labadooda wax laga weydiin doono dhaqdhaqaaqyadii ay ku qorsheeyeen Mombasa.
VIDEO RAW: Sidii laba tuhmane argagixiso ay u qabteen Recce Squad iyo Boliska La-dagaalanka Argaggixisada kanaalka Likoni-Ferry ee Mombasa horaantii maanta iyo qoryaha AK-47 iyo noocyo kala duwan oo rasaas ah hawlgalka wadajirka ah. pic.twitter.com/N2UmEDzN0D
- Zakariya Suleiman (@Sul5KE) August 23, 2021
Booliisku waxay kaloo sheegeen in la soo qaban doono dad badan.
Xubnaha ka ah Guddiga Dalxiiska Afrika Waxay ka wada hadleen dhacdada ATB WhatsApp Group iyagoo leh: "Waxay qorshaynayeen inay qarxiyaan doonnida saaka, laakiin Ilaahay ayaa mahad leh Ciidamada Gaarka ah ayaa soo dhexgalay."
New Zealand waxay beegsanaysaa 90% heerka tallaalka si loo dhammeeyo
Duulimaadyo badan oo Grenada ah oo ka imanaya USA iyo Canada hadda
Hindiya oo Abuurtay Duulimaad Drone ah oo Wax ku ool ah si ay u suurta gasho ...
Qorshayaal waaweyn oo loogu talagalay Wasiirka Dalxiiska Jamaica ee ...
Maareeyaha Cusub wuxuu Helm ka qaataa Goobaha Dalxiiska ee Vail
Ma jiro wax khasaare ah: Dhulgariir xooggan oo ku dhuftay Giriigga ...
Admin Nasasho wuxuu leeyahay,
Oktoobar 20, 2021 at 13: 36
شات مبدعين شات صوتي شات عراق دريم شات العراق دردشة